Resa-ke navadika resa-po | 102 KARA
Tamin’ny zoma lasa teo dia nakaton-drafanjakana ny orin’asa TIKO triple AAA tao Andranomanelatra-ANTSIRABE.
Ny Prefet tany an-toerana niaraka tamin’ny mpitandro filaminana no nilaza tamin’ny fanamafisam-peo fa nahazo baiko tamin’ny Fanjakana fa tsy maintsy AKATONA ity orin’asa ity. Sady NALAHELO no TEZITRA tamin’izany ny vahoaka ary indrindra fa ny mpiasa tany an-toerana.
Tsy hitanay izay hanaovana ireto ronono be dia be nentinay ireto hoy ireo tantsaha ka dia nariany tamin’ny làlana hanehoany ny hatezerany.
Tsy vitany hoe : NAKATONA fotsiny ilay orin’asa fa notapahan’ny JIRAMA ihany koa ny herin’aratra mpamatsy azy.
Nambaran’Andriamatoa Lanto RABENATOANDRO fa raha 42 izy ireo tao amin’ity orin’asa ity tamin’ny taona 2016 dia efa tafakatra 800 mahery ankehitriny ny mpiasa ao amin’izao fotoana izao. Very fanahy mbola velona izy ireo, very asa fivelomana sy famelomam-bady aman-janaka.
Ny vokatra be dia be efa vita ary napetraka ao amin’ vata fampangatsiahana dia tsy hisy azo antenaina intsony satria hitsonika sy ho lo ary ho maimbo ao daholo.
Dradradradraina sy anaovana antso avo ny vahiny hanangana orin’asa hampandrosoana ny Firenena. Ny ORIN’ASA TENA MALAGASY anefa dia anaovana ANTSOJAY toy izao. Mampametram-panontaniana hoe :
Tsy fitiavana ve, sa FIALONANA no anton’izao ? ka ny resaka fampiroboroboana ny EKONOMIA ( RESA-KE ) nafangaro amin’ny RESA-PO na ny resaka POLITIKA ( RESA-PO) ?
Dia ho aiza ihany isika ity e ?
15 octobre 2017 - 23 h 21 min Economie 316 vues